टाईटानिकको सुपरहिट गित सँग जोडिएको मेरो 'उबर यात्रा' - Parichaya.com
टाईटानिकको सुपरहिट गित सँग जोडिएको मेरो ‘उबर यात्रा’
By परिचय	 On १ भाद्र २०७८, मंगलवार १५:०१ 0
नवीन घायल /
सिडनि स्थित बरउडमा रहेको ईभेन्ट सिनेमा बाट चलचित्र बाहुबली हेरेर हल बाहिर निस्कदा रातको झण्डै एक बजिसकेको थियो। हतार हतार गरेर दगुर्दै रेलको स्टेशन पुग्दा त सबा एक नै भईसेको थियो । रेल स्टेसन आईपुग्दा सबैतिर सुनसान थियो। कारण , रातिको एक बजेबाट बिहान चार बजे सम्मका लागि रेल बन्द भईसकेको थियो। यो कुरा मलाई पहिला थाहा थिएन। खासमा म बरउड बाट रेल चढेर रकडेल आउनुपर्ने थियो। त्यसो त अस्ट्रेलिया आएको भरखर दुई महिना जति भएको थियो। बाटोको बारेमा राम्रो जानकारी पनि थिएन। रेल चढेर कुन प्लाट फर्म बाट कता पुगिन्छ भन्ने समेत थाहा थिएन। रकडेल छोडेर कतै जानु पर्यो भने आफन्त लाई सोधेर ,अनि लेखेर जानुपर्ने अवस्था थियो। जब रेल बन्द भईसकेको भन्ने थाहा पाए , त्यसपछि म अक्क न बक्क भए। दिउँसो देखि केहि पनि नखाएका कारण भोकले समेत छट्पटी भईरहेको थियो।
निराश हुदै बरउड स्टेसन बाट तल फर्किएर बाटोमा उभिरहेको थिए। अब के गर्ने भनेर केहि सोच्न सकिरहेको थिईन। त्यो राति कता जाने अथवा हिडेर रकडेल जाँउ भने पनि संभव थिएन। रेल चढेर रकडेल जाँदा त चालिस मिनेट भन्दा बढि लाग्थ्यो भने अब हिडेर जाने कुरा त्यो पनि बाटोको बारेमा थाहा नभएको सकिने कुरै थिएन। मनमनै अब बिहान चार बजेसम्म यहि रेल कुरेर बस्छु नै भन्ने थियो। यतिकैमा दुईजना नेपाली युवा हातमा चुरोट सल्काउदै एक आपसमा गफ गर्दै मेरो अगाडि बाट गए। उनिहरूले नेपाली भाषामै गफ गरेको हुनाले मैले यिनिहरू नेपालि नै रहेछन् भन्ने पत्तो पाए। अनि मैले पछाडिबाट उनिहरूलाई बोलाउदै मेरो समस्या बताए। यतिकैमा एउटाले भन्यो दाई उबर चढेर जानु नू ।
आफु कहाँ र कुन ठाँउमा जाने हो त्यहि ठाउँको ठेगाना र घर नंबर हानेपछि लगभग पाँच सात मिनेटमा उबर आईपुग्दो रहेछ। नेपालमा ट्याक्सि भनेर हातले रोकेर चढ्ने बानि परेको म यहाँ भने मोबाईल को एप बाट नै गाडि बोलाएर आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुराले दंग थिए। भाडा पनि आाफ्नै बैक एकाउन्ट सँग लिङ्क गरेर अटोमेटिक काटिने रहेछ।
उबर चढेर जाने हैन यो उबर भनेको के हो मैले उनिहरूलाई सोधे धत् दाई पनि, उबर भन्ने थाहा छैन यो एउटा ट्याक्सि जस्तै हो तपाईं लाई भनेकै ठाउँमा तपाईंकै घरमा पुर्याउँछ। खै ल्याउनुस् , तपाईंको मोबाईल भन्दै उनिहरूले लौ हेर दाईको मोबाईलमा उबर एप नै रहेनछ भन्दै उतिखेरै एप डाउनलोड गरेर एउटा प्राईभेट कार लाई बोलाए। अनि भन्न थाले लौ दाई जानुस् , यस्ले तपाईं बस्ने ठाउँ सम्म पुर्याईदिन्छ। यसअघि नै उनिहरूले मेरो रकडेल को ठेगाना सोधिसकेका थिए। धन्न मैले ठेगाना सम्झिएको हुनाले उनिहरूलाई उबर बोलाउन सजिलो भएछ। जिवनमै पहिलो चोटि उबर चढ्ने अनुभव मैले यहि दिन लिदै थिए। आफु कहाँ र कुन ठाँउमा जाने हो त्यहि ठाउँको ठेगाना र घर नंबर हानेपछि लगभग पाँच सात मिनेटमा उबर आईपुग्दो रहेछ। नेपालमा ट्याक्सि भनेर हातले रोकेर चढ्ने बानि परेको म यहाँ भने मोबाईल को एप बाट नै गाडि बोलाएर आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुराले दंग थिए। भाडा पनि आाफ्नै बैक एकाउन्ट सँग लिङ्क गरेर अटोमेटिक काटिने रहेछ।
उबर चढिसकेपछि पैसा कति भयो भनेर पनि सोध्न नपर्ने रहेछ। दाई मिलाएर लानु न भनेर बार्गेनिङ गरेर समय बर्बाद पनि गर्न नपर्ने रहेछ। सबै कुरा सिस्टममै हुने भएकोले डाईभर सँग नबोलिकनै आफ्नो गन्तव्य सम्म पुग्न मिल्दो रहेछ। जब उनिहरूले मलाई उबर अर्डर गरेर गाडिमा हालेर बिदाई गरेर पठाए तब मेरो मनभित्र कौतुहलता पैदा हुन थाल्यो। अनि उबर चलाईरहेको डाईभरलाई प्रश्न गर्न तम्सिए। सोधे होयर आर यु फ्रम उसले जवाफ दियो फ्रम ईण्डिया। जव उसले म ईण्डिया बाट भन्यो तब मैले फेरि सोधे क्यान यु स्पिक हिन्दि हँ बताईय , आप नेपाल से हो भनेर उल्टै मलाई प्रति प्रश्न गर्यो। अब भने मलाई कुरा गर्न सजिलो भईसकेको थियो। किनकि मेरो अंग्रेजी भन्दा हिन्दी भाषा राम्रो थियो। सानैदेखि हिन्दि फिल्म र सिरियलहरू हेर्ने बानि भएकोले म आफुलाई चाहिने जति हिन्दी राम्रोसँग बोल्न सक्थे। मैले उसलाई फेरि सोधे ईण्डिया कहाँसे हो आप उसले भन्यो उडिसा से। अनि मैले उबर चलाउन थालेको कति भयो भनेको चार बर्ष भयो भन्यो। कुराकानिकै क्रममा उबर उसले पार्ट टाईम चलाउने गरेको बतायो।
हप्तामा छ दिन लगातार काम मा जानु पर्दा कहिलेकाही त सारै दिक्क लागेर आउँथ्यो। यसअघि लगातार छ दिन काम गर्ने बानि मेरो कहिल्यै थिएन।सजिलो र बसि बसि गर्ने काम के होला भनेर सधै सोचिरहन्थे। शरिरलाई पनि तेति दुख नहुने र बिशेषगरि आफुले चाहेको समयमा शुरू गर्न पाईने एकमात्र काम थियो उबर।
दिउँसो सिटि तिर बिल्डिङ मेनेजरको काम गर्ने र बेलुकी भएपछि उबर चलाउने उसको दैनिकि रहेछ। मैले उबर गर्नलाई के के गर्नुपर्छ भनेर सोधे उसले अस्ट्रेलियन फुल लाईसेन्स एक बर्ष पुरानो भएपछि चलाउन पाईने नियम बतायो। आफ्नै घरको निजि कार वा भाडामा लिएको कार पनि उबरमा दर्ता गरेर चलाउन मिल्ने उसको भनाई थियो। उसको गाडि बाट झर्ने बेला सम्म मैले धेरै कुरा सोधिसकेको थिए। यसपछि भने मेरो मनमा धेरै कुरा खेल्न थाल्यो। मलाई पनि भित्र भित्रै उबर डाईभर हुने रहर जाग्न थाल्यो। झ्वाट्ट हेर्दा फिजिकल काम गर्न नपर्ने , बसि बसि गाडि चलाए हुने, आफ्नै टाईममा निस्कन पाईने , कसैको अण्डरमा बस्न नपर्ने , आफुले चाहेको समयमा बिश्राम लिन पाईने आदि जस्ता कुराले उबर चलाउने काम पक्कै पनि सजिलो हो भन्ने निष्कर्ष निकाले। किनकि यतिबेला म हप्तामा छ दिन सिड्निको मास्कोट भन्ने ठाउँमा क्लिनिङको काम गर्थे। हप्तामा छ दिन लगातार काम मा जानु पर्दा कहिलेकाही त सारै दिक्क लागेर आउँथ्यो। यसअघि लगातार छ दिन काम गर्ने बानि मेरो कहिल्यै थिएन।सजिलो र बसि बसि गर्ने काम के होला भनेर सधै सोचिरहन्थे। शरिरलाई पनि तेति दुख नहुने र बिशेषगरि आफुले चाहेको समयमा शुरू गर्न पाईने एकमात्र काम थियो उबर।
उबर ईट्स गरिरहेको समयमा नेपालका एक फिल्मि पत्रकार राजन घिमिरे त्यो बेला सिड्निमै थिए । एकदिन उनले मलाई झोलामा खाना बोकेर दौडिरहेको देखे। अनि भने ल मित्र , तपाईंको यो मिहिनेत र कामको बारेमा म एक आर्टिकल तयार पार्छुू भन्दै मेरो बारेमा एउटा लेख बनाए भोकाएकाहरूलाई सिड्निमा खुवाउदै पोखराका नविन । उबर ईट्स गर्दा गर्दै एक बर्ष बितेको पनि पत्तै भएन।
अन्तत: अठार बर्ष पुरानो मेरो नेपालको ओरिजिनल फुल डाईभिङ लाईसेन्स भिडाउदै मैले सजिलै सिड्निमा यहाँको फुल लाईसेन्स निकाले। यहाँको फुल लाईसेन्स निकाल्न यसअघि गर्नुपर्ने डि. के. टि. को परिक्षा अनि डाईभिङ टेस्टको परिक्षा पनि मैले एकैपटकमा पास गरे। जब मेरो हातमा फुल लाईसेन्स आयो अनि तुरुन्तै उबरमा दर्ता गरे। तर यो दर्ता उबर ईट्समा थियो। उबर राईड अर्थात् मान्छे बोक्नको लागि त फुल लाईसेन्स पनि एक बर्ष पुरानो हुनुपर्ने थियो। यो कुरा मलाई पहिल्यै तिनै ईण्डिएन उबर डाईभरले भनेका थिए। एक बर्ष जति उबर ईट्स अर्थात् घर घरमा खाना पुर्याउने काम गरे। उहि एपको माध्यम द्वारा ग्राहकले कुनै पनि रेण्टुरेण्ट वा फुड पसल बाट आफुलाई मन पर्ने खाना अर्डर गर्थे र त्यो खाना घर सम्म पुर्याउने मेरो काम हुन्थ्यो। उबर ईट्स गरिरहेको समयमा नेपालका एक फिल्मि पत्रकार राजन घिमिरे त्यो बेला सिड्निमै थिए । एकदिन उनले मलाई झोलामा खाना बोकेर दौडिरहेको देखे। अनि भने ल मित्र , तपाईंको यो मिहिनेत र कामको बारेमा म एक आर्टिकल तयार पार्छुू भन्दै मेरो बारेमा एउटा लेख बनाए भोकाएकाहरूलाई सिड्निमा खुवाउदै पोखराका नविन । उबर ईट्स गर्दा गर्दै एक बर्ष बितेको पनि पत्तै भएन। जब मेरो अस्ट्रेलियन लाईसेन्स एक बर्ष पुरा भयो तब मैले सिड्निको च्यासवुड मा गर्दै आएको फुल टाईमको काम पनि छाडिदिए।
नेभिगेटर अर्थात् बाटो देखाउने म्यापको भरमा प्यासेन्जर लाई घर सम्म पुर्याउनु उबर डाईभरको कर्तव्य हो। प्राय यात्रुहरू हतारमा हुन्छन्। उनिहरूलाई तोकिएकै समयमा गन्तव्य सम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। भन्नैपर्दा एज केयर, होम केयर र हस्पिटलमा काम गर्ने र कुनै कारण बश रेल छुटेर समयमै काममा पुग्नुपर्ने हरूले उबर गरिरहेका हुन्छन्।
किनकि यतिबेला मैले दिउसो च्यासवुडमा हप्तामा पाँच दिन काम गर्थे भने साँझ घरमा आएपछि उबर ईट्स सातै दिन गर्ने गरेको थिए। खासमा अस्ट्रेलियामा दुईवटा काम नगरि पैसा बचाउन सकिने अवस्था थिएन। मैले उबर राईडलाई नै फुल टाईम गर्छु भनेर च्यासवुडको काम बाट बिदा लिएको थिए। जब म उबर राईड गर्न योग्य भए त्यसपछि भने उबरले मलाई मान्छे बोक्न पाउने अनुमति दियो। मेरो उबर राईड अन्तर्गतको पहिलो ट्रिप स्ड्नििको कोग्रा भन्ने ठाँउबाट लापिरियस बिच पुर्याउनु पर्ने थियो । अन्दाजी सत्ताईस , अठ्ठाईस बर्षकि देखिने एक महिला कोग्रा बाट सो ठाउँमा जानको लागि मेरो गाडिमा चढेकि थिईन। उनि अस्ट्रेलियन थिईन। मेरो पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्यो। नेभिगेटरको भरमा उनलाई म सो ठाउँमा छोड्न जादै थिए , बाटोको रूट लाई राम्रोसँग पालना गर्न नसकेका कारण बिस मिनेटमा पुगिसक्नु पर्ने सो ठाउँमा पैतिस मिनेट लाग्यो। उनले मलाई अंग्रेजीमा नराम्रो सँग गालि गरिन। नेभिगेटर अर्थात् बाटो देखाउने म्यापको भरमा प्यासेन्जर लाई घर सम्म पुर्याउनु उबर डाईभरको कर्तव्य हो। प्राय यात्रुहरू हतारमा हुन्छन्। उनिहरूलाई तोकिएकै समयमा गन्तव्य सम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। भन्नैपर्दा एज केयर, होम केयर र हस्पिटलमा काम गर्ने र कुनै कारण बश रेल छुटेर समयमै काममा पुग्नुपर्ने हरूले उबर गरिरहेका हुन्छन्।
उबर गर्न थालेको झण्डै एक हप्ता जति भएको थियो । संयोग त्यो दिन भ्यालेनटाईन डेको दिन थियो। सिड्निको बोट्नी बाट बेलुकिपख तिन जना युवतीहरू मेरो उबरमा चढे। गाडिभित्र चर्चित फिल्म टाईटनिक को गित बजिरहेको थियो। गितको बोल थियो माई हार्ट विल गो अन। गित अलि मधुरो मधुरो बजिरेहको थियो। जब उनिहरू गाडिमा छिरेर सिट बेल्ट के लगाउदै थिए , एउटीले पछाडिबाट भनिहालि वाह क्यान यु ट्रन अप दिस सङ अफ कोर्स भन्दै मैले पनि अलिकति चर्को बजाईदिए।
तर मदिरा सेवन गरेर उबर गर्नेलाई समयको मतलब हुदैन। जे होस् १ छिटो छरितो तरिकाले आफ्नो गन्तव्य सम्म पुग्नलाई उबरको जरूरी हुन्छ। दिनहरू बित्दै गए। उबर गर्न थालेको झण्डै एक हप्ता जति भएको थियो । संयोग त्यो दिन भ्यालेनटाईन डेको दिन थियो। सिड्निको बोट्नी बाट बेलुकिपख तिन जना युवतीहरू मेरो उबरमा चढे। गाडिभित्र चर्चित फिल्म टाईटनिक को गित बजिरहेको थियो। गितको बोल थियो माई हार्ट विल गो अन। गित अलि मधुरो मधुरो बजिरेहको थियो। जब उनिहरू गाडिमा छिरेर सिट बेल्ट के लगाउदै थिए , एउटीले पछाडिबाट भनिहालि वाह क्यान यु ट्रन अप दिस सङ अफ कोर्स भन्दै मैले पनि अलिकति चर्को बजाईदिए। तेसपछि त केहि चाहियो गाडिको झ्यालको सिसा खोल्दै चर्को गरेर तिनै जनाले गाउन थाले। खासमा उनिहरू भ्यालेनटाईन मनाउन सिटि तिर जादै थिए। उनिहरूले घरि घरि टाउको बाहिर निकाल्दै गाउँदै थिए। यतिकैमा मेरो पछाडि पुलिसको गाडि आईरहेको देखे। उनिहरूको चर्तीकला रोकिएको थिएन। पछाडि पुलिस छ भनेर उनिहरूलाई जानकारी गराए। तर उनिहरूले सुनेको नसुनेई जस्तो गरेर झन् हौसिएर गाउन थाले । मलाई भने पुलिसले समातेर फाईन हान्ने नै भयो भन्ने लाग्यो। तर भाग्यवश हाम्रो गाडि लाई ओभरटेक गर्दै पुलिसको गाडि अगाडि कुदयो । मैले धेरै बेर पुलिसको गाडि हेरिरहे।
माई हार्ट विल गो अन ।।। बजाउँदा मानिसहरूको भिन्दा भिन्दै प्रतिक्रिया आउँथ्यो। सयमा अन्ठानब्बे प्रतिशतले टाईटनिक मेरो बेस्ट मुभि हो भन्थे भने गितलाई पनि यो मेरो फेबराईट सङ हो भन्थे। अधिकाँश मानिसहरू गित सुन्दै भावबिहल हुन्थे र केहि मान्छेहरूले आखाँबाट आसु समेत झार्थे। उनिहरूले आखाँबाट आसु झारिरहेको मैले गाडिको अगाडि माथि रहेको हेड मिरर बाट देख्थे। गाडिमा बिभिन्न देशका , बिभिन्न जात जातिका , फरक संस्कृति र रहनसहन भएका मानिसहरू चढ्थे। किनकि अस्ट्रेलियामा बिश्वभरि बाट आएका बिभिन्न नेचरका मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्छन्।
अब भने लामो सास फेर्दै ढुक्क भए। युवतिहरूले झर्ने बेला सम्ममा दुईपटक यो गित सुने। बिचमा एउटीले आज भ्यालेनटाईन डे हो तर के गर्नु मेरो चाहि ब्वाईफ्रेन्ड छैन तँ नै हिड भनेर जिस्काउदै थिई। उनिहरू हल्का नशाको तालमा थिए । यो रात अलि अबेर सम्म मैले उबर चलाईरहेको थिए। सिड्निको रेडफ्रन बाट चढेका एक जोडिलाई पनि यहि गित सुनाए। उनिहरू मध्ये केटो चाहिले भन्यो वाह यो गितले मैले मेरो एक्स गलफ्रेन्ड को सम्झना गरायो । यो सुन्नासाथ उ सगै बसेकि केटिले आर यु सिरियस भन्दै चर्को स्वर गर्दै थिई। उबर चलाउने क्रममा जब मैले गाडिमा टाईटनिक यो गित बजाउन शुरू गर्थे तव प्राय यात्रुहरू उत्साहित हुदै अलि चर्को गरेर बजाउन भन्थे। माई हार्ट विल गो अन ।।। बजाउँदा मानिसहरूको भिन्दा भिन्दै प्रतिक्रिया आउँथ्यो। सयमा अन्ठानब्बे प्रतिशतले टाईटनिक मेरो बेस्ट मुभि हो भन्थे भने गितलाई पनि यो मेरो फेबराईट सङ हो भन्थे। अधिकाँश मानिसहरू गित सुन्दै भावबिहल हुन्थे र केहि मान्छेहरूले आखाँबाट आसु समेत झार्थे। उनिहरूले आखाँबाट आसु झारिरहेको मैले गाडिको अगाडि माथि रहेको हेड मिरर बाट देख्थे। गाडिमा बिभिन्न देशका , बिभिन्न जात जातिका , फरक संस्कृति र रहनसहन भएका मानिसहरू चढ्थे। किनकि अस्ट्रेलियामा बिश्वभरि बाट आएका बिभिन्न नेचरका मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्छन्। जस्तै अल्लारे भएपनि ठिटो वा तरूनी, बुढो वा रोगी जे भएपनि टाईटनिक यो गितले सबैको मन छोएको पाउथे मैले।
एकपटक सिड्निको पिरमन्ट बाट एउटी अर्धबैसे आईमाई मेरो गाडिमा चढेकि थिईन। गाडिमा यहि गित बजिरहेको थियो। एकछिन गित सुनेर यो फिल्म चल्ने बेलामा मेरो ठुलि छोरी जन्मेको बताईन्। हलमा गएर फिल्म हेरेको एक हप्ता पछि उनकि छोरि जन्मिएकि रे। छोरी जन्मिएको केहि समय पछि उनको पहिलो बुढासँग घरेलु हिंसा भएको कारण डिभोर्स गरिछन्। समयको अन्तरालमा उनले तेर्सो बिवाह सम्म गरिछन् तर तेस्रो बिबाह गरेबाट नै उनकि छोरी सम्पर्क बिहिन भईन रे। छोरी आजसम्म कहाँ के गर्दैछिन् थाहा नै छैन रे। खासमा उनकि छोरि उनको तेस्रो बिबाह सँग सहमत थिईनन् रे। बिचमा छोरिले उनलाई मलाई नखोज्नु भनेर चिठि पठाईन रे। अहिले भने उनि तेस्रो बुढासँग बसिरहेकि छिन्। तर आमाको मन न हो छोरिलाई सम्झेर रूदै थिईन। त्यसो त अस्ट्रेलियनहरू तेति सारो भावनामा बग्दैनन्। यिनिहरूका लागि बिबाह गर्नु , छुट्टिनु सामान्य नै कुरा हो। एकपटक नोू भनेसी नोनै हुन्छ। अस्ट्रेलियनको अगाडि बिन्ति, अनुरोध, आँसु , पिर मर्का केहि पनि चल्दैन। आफ्नो पौरख र खुबिले बाँच्ने हो भन्छन्।
गाडिमा गित बजेपछि यो गित र फिल्म टाईटानिकको बारेमा नजानेको नसुनेको भनेको मान्छे नै हुदैनथ्यो । हरेकले आफ्नो एउटा हिस्सा सुनाउँथे। कोहिको यो फिल्म चल्ने ताका लोग्ने बितेको, कोहिको कार दुर्घटना भएको, कोहिको फिल्म हेर्न जादाँ वालेट अनि घडि हराएको, कोहिको छोरा जन्मिएको, कोहिले पुलिसमा जागिर पाएको, कोहिको यहि बर्ष बिबाह भएको, कोहिले कफि सप संचालन गरेको , कोहिले कन्स्ट्रक्सनको ठेक्का हात परेको, आदि जस्ता कुराहरू सुनाएर यात्रालाई रमाईलो बनाउथे।
गाडिमा गित बजेपछि यो गित र फिल्म टाईटानिकको बारेमा नजानेको नसुनेको भनेको मान्छे नै हुदैनथ्यो । हरेकले आफ्नो एउटा हिस्सा सुनाउँथे। कोहिको यो फिल्म चल्ने ताका लोग्ने बितेको, कोहिको कार दुर्घटना भएको, कोहिको फिल्म हेर्न जादाँ वालेट अनि घडि हराएको, कोहिको छोरा जन्मिएको, कोहिले पुलिसमा जागिर पाएको, कोहिको यहि बर्ष बिबाह भएको, कोहिले कफि सप संचालन गरेको , कोहिले कन्स्ट्रक्सनको ठेक्का हात परेको, आदि जस्ता कुराहरू सुनाएर यात्रालाई रमाईलो बनाउथे। तर यसबिचमा एउटा दम्पतीले सुनाएको प्रसँग भने निकै चाखलाग्दो थियो। उनिहरू दुबैजना घरमा भि.सि .डि डेक बाट बेलुकिपख टाईटानिक हेर्दै थिए रे । गर्मिको समय ढोका खुलै राखेर पंखा लगाउदै फिल्म हेरिरहदा उनिहरूले सार्है माया गरेर पालेको बिरालो हराएछ। फिल्म हेर्न सुरू गर्दा बिरालो सँगै थियो रे तर फिल्म सकिदा बिरालो नै गायब। भोलिपल्ट उठेर बिरालो खोज्दा कहि भेटिएनछ। बिरालो फेला पार्ने लाई पुरस्कार दिने भनेर चोक र गल्लिमा सुचना टाँस गरेछन् । तरपनि बिरालो कहि फेला नपरेपछि निरास हुदै घर फर्किएछन्। जब टाईटनिक को यो गित बज्छ तब हामि हाम्रो हराएको प्यारो बिरालोलाई सम्झन्छौ भन्दै थिए।
कृस्चिएन नामको मेरो एउटा अस्ट्रेलियन मित्र छ। उसले पनि धेरै पटक टाईटानिक फिल्म हेरेको रहेछ। जब उसले यो गित सुन्छ अनि आमालाई सम्झेर आँखाभरि आँसु बनाउँछ। खासमा केहि समय पहिला उ र म च्यासवुडमा सँगै काम गर्थेउ। उसले मलाई मेरो प्राईभेट उबर फ्रेन भनेर बोलाउँछ। एकदिन उबरमा मैले उसलाई यहि गित सुनाउदै घरतर्फ छोड्न जादै थिए संयोगबश उसकि आमालाई गाडेको ठाँउ तेहि बाटोमै परेछ। उ केहिबेर अघिदेखि अनुहार मलिनो बनाउदै थियो । जब हामी उसकि आमालाई गाडेको ठाउँ अर्थात् चिहान डाँडो पार गरेर अगाडि जादै थियौ यतिकैमा उसले हात हल्लाउँदै भन्यो बाई बाई मम् । त्यसको केहि समयपछि मेरो मम् लाई यहि गाडिएको छ म बर्षमा एकदिन मम् लाई भेट्न फुल लिएर आउछु भन्यो। खासमा उ कमेडिएन स्वभावको थियो , तर आफ्नि आमालाई गाडेको ठाउँ क्रस भएको हुनाले उ एकैछिनमा शान्त भयो।
फिल्म र गितको चर्चा अनि फिल्म सँग जोडिएको उनिहरूको जिवन काहनि सुन्दा लाग्थ्यो यो फिल्मको लोकप्रियताको बारेमा जति बयान गरेपनि कमै हुन्छ। मैले नजिकबाट हरेक ब्यक्तिको अनुभव सुन्दा लाग्थो फिल्म होस् त टाईटनिक जस्तो। प्रत्येक ब्यक्ति को मन र मस्तिष्कमा गहिरो छाप छोड्ने खालको । टाईटनिक डुब्दाको क्षण होस् वा हिरो र हिरोनि को प्रेम प्रसङ्ग को कुरा होस्, फिल्मको अन्तिममा हिरो ज्याक मर्दाको क्षणले सबैलाई रूवाएको रहेछ।
पार्ट टाईम अनि फुल टाईम दुबै गरेर उबर चलाउन थालेको मेरो तिन बर्ष भएको छ। यो बिचमा मलाई कसैले पनि गलत ब्यवहार गरेका छैनन्। जस्तै रक्सि खाएर मान्छेहरू उबर चढेपनि उनिहरूले गर्ने ब्यवहार भने राम्रै हुन्छ। धेरै रक्सि खाएर चढेका अस्ट्रेलियनहरू भने आफै एकोहोरो बोल्ने अनि हाँस्ने गर्छन्। उनिहरूको कुरा नबुझे पनि बुझेजस्तै गरेर हास्नु पर्थो। । धेरै पटक त उनिहरूले बोलेको अंग्रेजी नबुझेर यत्तिकै पनि हो भनेर सहि थापेको छु। जब उनिहरूका धेरै प्रश्न आउन थाल्थे अनि उनिहरूको ध्यान भंग गर्न मैले यहि गित बजाईदिन्थे। बोल्दै गरेका उनिहरूको मुड जस्तो भएपनि गित सुनेर एकछिनमा शान्त हुन्थ्ये। फिल्म र गितको चर्चा अनि फिल्म सँग जोडिएको उनिहरूको जिवन काहनि सुन्दा लाग्थ्यो यो फिल्मको लोकप्रियताको बारेमा जति बयान गरेपनि कमै हुन्छ। मैले नजिकबाट हरेक ब्यक्तिको अनुभव सुन्दा लाग्थो फिल्म होस् त टाईटनिक जस्तो। प्रत्येक ब्यक्ति को मन र मस्तिष्कमा गहिरो छाप छोड्ने खालको । टाईटनिक डुब्दाको क्षण होस् वा हिरो र हिरोनि को प्रेम प्रसङ्ग को कुरा होस्, फिल्मको अन्तिममा हिरो ज्याक मर्दाको क्षणले सबैलाई रूवाएको रहेछ।
धेरै सुनेको हुनाले अहिले यो गितको सबै शब्दहरू कन्ठस्थ भएका छन्। कहिलेकाही खालि भएको समयमा यो गितको म्युजिक ट्रयाकमा पनि मैले गाउने गरेको छु। गित सुन्दै जाँदा यो गित गाउने वास्तविक गायिका सलिन डियोन को म ठुलो फ्यान भएको छु। त्यसो त म अरू अंग्रेजी गितहरू तेति सुन्दिन र बुझ्दिन पनि । तर मेरो जिवनको आजसम्मको पहिलो र अन्तिम सबै शब्द बुझेको अंग्रेजीमा गाउन सक्ने , एउटै मात्र गित त हो – माई हार्ट विल गो अन।।।
टाईटानिक फिल्मको बारेमा मेरो अनुभव भन्नुपर्दा द्दण्छछ सालमा मैले यो फिल्म पहिलो पल्ट हेरेको थिए। आफ्नै ठुलोबुवा को छोरा निर्मल पौडेल दाई सँग बसेर मैले पोखराको सिम्पानिको घरमा बसेर यो फिल्म हेरेको थिए। तेतिबेला फिल्मको भाषा अंग्रेजी राम्रोसँग नबुझेपनि टाईटानिक डुब्दै गरेको दृश्यले भने मेरो मन छोएको थियो। फिल्म हेरको तिन चार दिनसम्म मेरो दिमागमा टाईटानिकको त्यो कारूणिक दृश्य वरपर घुमिरहनथ्यो। टाईटानिक भन्ने बितिकै अझै पनि मलाई त्यो जाहाज दुई टुक्रा भएर समुन्द्रमा डुब्दै गर्दा मान्छेहरू माथिबाट खस्दै , ठोक्किदै , बजारिदै , चिच्याउदै, पानिमा डुबेको दृश्यले भावबिह्वल बनाउँछ। उबर चलाउने क्रममा अरूलाई सुनाउने बाहानामा मैले पनि धेरै पटक यो गित सुने। कैयन् पटक उबर चढिरहेका यात्रुहरूले गाडिको झ्यालको सिसा खोलेर हामी सगै गाउनु पर्छ भन्दा उनिहरू सँगै नगाएको पनि होईन। धेरै सुनेको हुनाले अहिले यो गितको सबै शब्दहरू कन्ठस्थ भएका छन्। कहिलेकाही खालि भएको समयमा यो गितको म्युजिक ट्रयाकमा पनि मैले गाउने गरेको छु। गित सुन्दै जाँदा यो गित गाउने वास्तविक गायिका सलिन डियोन को म ठुलो फ्यान भएको छु। त्यसो त म अरू अंग्रेजी गितहरू तेति सुन्दिन र बुझ्दिन पनि । तर मेरो जिवनको आजसम्मको पहिलो र अन्तिम सबै शब्द बुझेको अंग्रेजीमा गाउन सक्ने , एउटै मात्र गित त हो – माई हार्ट विल गो अन।।।
मन्त्रिपरिषदले ल्यायो दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश : २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन पाउने
भूतपूर्व गोर्खा आन्दोलन : ब्रिटिश प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई एनआरएन यूकेको ज्ञापनपत्र (पत्रसहित)